Nepal Dayari | विश्वकै सबैभन्दा सानो गाई, हेर्न आउने मान्छेको भिड ॐ ! लेखी सेयर गर्नुहोस्
विश्वकै सबैभन्दा सानो गाई, हेर्न आउने मान्छेको भिड ॐ ! लेखी सेयर गर्नुहोस्
माघ २७, २०७८ बिहिबार २१७ पटक हेरिएको
विश्वकै सबैभन्दा सानो गाई, हेर्न आउने मान्छेको भिड ॐ ! लेखी सेयर
बंगलादेशमा विश्वकै सबैभन्दा सानो दावी गरिएको एउटा गाई भेट्टिएको छ । रानी नामको यो २३ वर्षीय भुटानी गाई केवल ५१ सेन्टिमिटर अग्लो छ र यसको तौल २८ केजी मात्रै छ ।उक्त गाई अहिले बंगलादेशमा नयाँ सेलिब्रेटी नै बनिसकेको छ । यसलाई हेर्न आजकल दैनिक मानिसहरुको भीड लाग्छ ।बंगलादेशमा लकडाउन हनुका बाबजुद चरिग्रामस्थित ढाकाबाट नजिक रहेको फार्ममा यस गाईलाई हेर्न १५ सय व्यक्ति पुगिसकेका छन् ।
यस फार्मका व्यवस्थापक हसन हाउलाडरले रानीलाई विश्वको सबैभन्दा सानो गाईका रुपमा दर्ता गर्न गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा निवेदन दिइसकेका छन् । ‘मैले यति सानो गाई कहिल्यै देखेको थिइँन,’ गाई हेर्न आएकी रिना बेगमले भनिन्।अहिलेसम्म विश्वकै सानो गाईको कीर्तिमान मनिकयामका नाममा छ । भारतको यो गाई खुरदेखि नाप्दा ६१ दशमलव १ सेन्टिमिटर अग्लो छ ।
विश्वकै सबैभन्दा सानो दावी गरिएको एउटा गाई भेट्टिएको छ । रानी नामको यो २३ वर्षीय भुटानी गाई केवल ५१ सेन्टिमिटर अग्लो छ र यसको तौल २८ केजी मात्रै छ ।उक्त गाई अहिले बंगलादेशमा नयाँ सेलिब्रेटी नै बनिसकेको छ । यसलाई हेर्न आजकल दैनिक मानिसहरुको भीड लाग्छ ।बंगलादेशमा लकडाउन हनुका बाबजुद चरिग्रामस्थित ढाकाबाट नजिक रहेको फार्ममा यस गाईलाई हेर्न १५ सय व्यक्ति पुगिसकेका छन् ।
यस फार्मका व्यवस्थापक हसन हाउलाडरले रानीलाई विश्वको सबैभन्दा सानो गाईका रुपमा दर्ता गर्न गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा निवेदन दिइसकेका छन् । ‘मैले यति सानो गाई कहिल्यै देखेको थिइँन,’ गाई हेर्न आएकी रिना बेगमले भनिन्।
अहिलेसम्म विश्वकै सानो गाईको कीर्तिमान मनिकयामका नाममा छ । भारतको यो गाई खुरदेखि नाप्दा ६१ दशमलव १ सेन्टिमिटर अग्लो छ ।तलको भिडियो हेर्नुहोस्..